ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 39.1 ဘာလိုလိုနဲ့ ဆယ်နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပကော..
I must esteem your familiar life.
Congratulation ပါ နနကြီးခင်ဗျား။
Do for me saya thike combine note lay...
Happy anniversay, Captain. :-)
တကယ်ပဲ ၁၀ နှစ်လား
ဆယ်နှစ်မှ ရွှေရတု စိန်ရတု တိုင်အောင် ချမ်းသာသုခ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာ :)
ဆယ်နှစ်မှ စ၍ နောင်နှစ်တရာတိုင် သားသမီး မြေးမြစ် တစ်ဒါဇင်ခန့်ဖြင့် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
ကိုကြီးနဲ့ မီးမီး အတူတကွ နှစ် ၁၀၀ တိုင်ပါစေ။
နှစ် ၁,၀၀၀ တိုင်ပါစေ..
ကိုနဗနရေ Happy Anniversary ပါ။
အကိုကမှ ဆံချည်မျှင်လောက် ပလက်တီနမ် ဆွဲကြိုးဝယ်ပေးဖော်ရသေးတယ်။ သမီးကောင်လေးကဆို လေနဲ့တောင် မ၀ယ်ပေးဘူးပါဘူးအမရယ်။ အမကံကောင်းပါတယ်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ဒီထက်ပိုပြီး သာယာချမ်း မြေ့ပျော်ရွှင်ဘွယ် ကောင်းတဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်းတောင်းပါတယ်ဗျို့ :D
တူလို့တွေ့ကြပေတာပဲ။ ငါ့ညီလေး..ငါ့ညီလေး နဲ့.. သူများယောက်ျားကို ဒါတွေလက်ထပ်သင်ကြားပေးထားတာဖြစ်ရမယ်။ ဘယ်လိုကြီးတွေမှန်းကိုမသိဘူး။